ပြည်ပ ပို့ကုန်အတွက် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ သတင်းအချက်အလက်များ
အားနည်းချက်များ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေသည့် မြန်မာ့ဆန်စက်များ... ဇူလိုင်လ ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ တန်ချိန် နှစ်သိန်းကျော် တင်ပို့ပြီး ဇွန်လတင်ပို့မှုထက် ပိုမို... ပခုက္ကူကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပဲစင်းငုံနီနှင့်ပြောင်းဖူစေ့ ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ... စံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်ပြီး အရောင်းနည်းခဲ့သည့် မြန်မာ့ရွှေ... အဆောက်အအုံပါမစ် အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်သည့်စနစ် စတင်... အလားအလာရှိသော ပို့ကုန်အမယ်သစ် ဆီသီးအဆီ... အာဖရိက ဝက်အပြင်းဖျားရောဂါ ကူးစက်ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်နေ... မဲခေါင်-လန်ချန်း အထူးရန်ပုံငွေ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကျိုးရှိပါစေ... ဂျပန် ညာမောင်းကား အများစုသာ ဝယ်လက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသလို အဝယ်အမြဲရှိနေ... ပြည်ပကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ဆင်...
Welcome (Buy | Sell) | Upload Items | Login
posted on 09-January-2011
soft shell crab ကဏန်းပျော့
?????????? ?????????? 5kg ??????????????????????? ?????????????????????? Phone no 01-214355,09-5640374,09-5101514, Contact Person : Ko Yu Lwin Contact Email : mgyulwin@gmail.com Contact Company : Aung Moe Khine Manufacturing Co.,Ltd
Contact Person : Ko Yu Lwin
Contact Email : mgyulwin@gmail.com
Contact Company : Aung Moe Khine Manufacturing Co.,Ltd
Contact Company's Address
Contact Person : Ko Yu Lwin Contact Email : mgyulwin@gmail.com Contact Company : Aung Moe Khine Manufacturing Co.,Ltd Contact Company's Address No,6 A,U Lu Ni St,Kyee Myin Ding Tsp,Yangon Ph -01-214355,09-5101514,09-5640374,01-724064
Period of Validity: 01-January-2011